Ugxile entsheni ethula inkulumo ePhalamende uMengameli Zuma | News24
Ugxile entsheni ethula inkulumo ePhalamende uMengameli Zuma
Durban - UMengameli Jacob Zuma wethule isabelomali seHhovisi lakhe ngoLwesithathu ePhalamende waqala ngokugxeka ukuhlukunyezwa nokubulawa kwezingane nabantu besifazane kuleli.
“Indaba yokubulawa kwezingane nabantu besifazane kumele iphele. Ngokunjalo futhi abantu besifazane kumele bathole ukwesekwa emakhaya kuqala,” esho.
UMengameli uqhubeke ngokubala izinto uhulumeni ohlela ukuzenza, ezibandakanya intsha kakhulu. Uthe kunesikhwama sama-SMME sika-R1bn esizosiza ukufukula amabhizinisi asafufusa.
UZuma uphinde washayela uhulumeni ihlombe ngokukwazi ukusebenza ngokuzikhandla ekulwisaneni ne-HIV/Aids kuleli. Uthi uhlelo lwakuleli lokukhipha imishanguzo yokuthithibalisa leli gciwane luhamba phambili emhlabeni wonke.
“Muhle kakhulu umsebenzi owenziwa nguhulumeni ngokulwisana nesandulela ngculazi kanye nengculazi uqobo.Sesinyukile ngisho isibalo sabantu abahlolela leli gciwane uma kuqhathaniswa nango-2009,” esho ePhalamende.
OLUNYE UDABA: UMBONO: ‘UZuma welusa, uyagquma uyaphalaza, akafani noMaimane osaba uchatho’
UZuma ube esethinta udaba lweState Capture, wathi akekho umuntu ovimbe ukuba kube nekhomishana ezophenya ngezinsolo zokubanjwa koMbuso ngobhongwane.
“Izandla zethu zivuliwe, akekho umuntu ovimbile ukuba kwenziwe uphenyo ngezinsolo ezikhona,” kusho uZuma obebukela eneme.
Uqhube ngokuthi kunabantu abasha abangu-10 000 abaqeqeshelwa ukwenza umsebenzi wezandla. Uthe uhulumeni usebenza ngokungakhathali ukuthuthukisa intsha yakuleli.
“Abantu abasha abangu-18 000 bazosizwa ekutheni bakwazi ukuba ngosomabhizinisi,” esho.
Uthe esevala uMengameli, wabonga isekela lakhe uCyril Ramaphosa kanye hhovisi lakhe ngokumeseka.
Umholi we-DA uMmusi Maimane usukume wathi kuyadabukisa ukuthi i-ANC akhula eyazi “seyafa”.
Uqhube wathi uZuma wabulala i-ANC kuqala, manje usebulala iNingizimu Afrika.